भाराड्कर आयरल्याण्डको पहिलो समलिंगी प्रधानमन्त्री !
एजेन्सी । लियो भाराड्कार आयरल्याण्डका प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन् । ३८ बर्षिय भाराड्कार रिपब्लिक अफ आयरल्याण्डको सत्तारुढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो पार्टी फाइन गेलको नेता चुनिएसंगै देशको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएको हो ।
६० प्रतिशत मत प्राप्त गरेका भाराड्करले प्रतिद्वन्द्वी हाउजिङ मन्त्री सिमोन कोभेनीलाई हराएका हुन् । भाराड्कर आयरल्याण्डको पहिलो समलिंगी (गे) प्रधानमन्त्री बन्ने छन । यस्तै उनी कम उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति पनि हुन् । भाराड्करले एक हप्ता भित्र पार्टीका नेता एन्डा केन्नीको ठाउँ लिनेछन । उनि आइरिस नर्स र डाक्टर भारतीमुलका डाक्टरका छोरा हुन ।उनका माता पिताले भारतमा काम गरेका थिए ।
भाराड्करको जन्म सन. १९७९ को जनवरी १८ मा डबलिनमा भएको थियो । उनका पिता अशोकले आइरिश मुलकी नर्स मरियमसँग विवाह गरेका थिए । भाराड्करको चुनावी अभियान उनको उमेर र समलैंगिकताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चाको विषय बन्यो ।
आयरल्याण्डलाई युरोपको सबैभन्दा रुढिवादी देशको रुपमा लिने गरिएको छ । तर भाराड्कर रुढिवादी देशको उदारवादी अनुहार बन्न सफल भएका छन् । सन् १९९० को दशकसम्म समलैंगिकता र सम्बन्ध विच्छेद गैरकानुनी रहेको देशको उनि पहिलो समलिंगी प्रधानमन्त्र बन्न लागेका हुन् ।
हिंसापश्चात् दिल्लीमा तनावपूर्ण वातावरण, गृहमन्त्री शाहको राजीनामा